Art is My Life: March 2009
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:13 PM7ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒီနေ့ ဘလော့ဂ်ကာမှာ ကြည့်လိုက်တာ။ ဘလော့စပေါ့နဲ့ မြန်မာပြည်နာမည်ခံပြီး ပရိုးဖိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူ နှစ်သောင်းကျော်သွားပြီဆိုတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က တစ်ထောင်ကျော်ပဲရှိတယ်။ အခုတော့ နှစ်သောင်းကျော်တဲ့။ မြန်လိုက်တာ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:25 AM6ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မနက်ဖြန် တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာ ဘန်ကာက်မှာ အိုင်စီရှိုးရှိတယ်။ နေရာကတော့ မသိဘူး :P။ ၀င်ကြေးကတော့ ဘတ်လေးရာတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတော်ကောင်း ဇနီးမောင်နှံက ဒကာခံမယ်ဆိုလို့ သွားကြည့်ဖြစ် ဦးမယ်ထင်တယ်။ သွားကြည့်ဖြစ်ရင်တော့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးပါမယ်။ အခုပုံလေးကတော့ သုဝဏ္ဏမှာ Nargis ရံပုံငွေတုန်းက ရိုက်ထားတာပါ။ အခုတင်ထားတဲ့ပုံကတော့ ဆိုက်ချုံ့ထားတာပါ။ ပုံဆိုက်အကြီးကြီး လိုချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 5:40 AM 13 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒါရိုက်တာကြီး တစ်ယောက်က ပြောဖူးသည်။ “ငါဒါရိုက်တာ လုပ်ခါစက၊ ဒါရိုက်တာ ဘယ်သူရိုက်သည် ဆိုတာမျိုး မလုပ်ချင်ဘူး ခပ်ဆန်းဆန်းလေး လုပ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒါရိုက်တာ ........ ရေးညွှန်းရိုက်ကူးသည် ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ ပထမသုံးလေးကား၊ အိုကေနေတာပဲ။ ဆယ်ကားလောက်လဲ ရိုက်ပြီးရော ၀မ်းစာက ကုန်သွားတယ်။ ငါ့မှာ ဆက်ရေးစရာ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ သူများဇာတ်လမ်းတွေကို ယူပြီးရိုက်ရတယ်။ သူများဇာတ်လမ်းတွေကို ရိုက်ပြီဆိုမှတော့ ကိုယ်ရေးတာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် ဒါရိုက်တာ....... ရေးညွှန်းရိုက်ကူးသည် ဆိုတာကြီးကို ဖျက်လိုက်ရတယ်။ ”
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က မင်းသိင်္ခ စာအုပ်တွေကို တော်တော်ကြီး ဖတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုတန်းဆယ်တန်း အရွယ်လောက်တွင် မင်းသိင်္ခလို ကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ထွက်နေတယ် ဖတ်ကြည့်ဆိုလို့ ကျွန်တော် ဖတ်ဖြစ်သည်။ သူ့စာအုပ်ကို တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကြိုက်သွားသည်။ နောက်ထပ် သူစာအုပ်တွေကို ထပ်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်သည်။ လေးငါးအုပ်လောက်လဲ ဖတ်ပြီးရော သူ့ဇာတ်လမ်းတွေက ထပ်လာသည်။ တစ်အုပ်နဲ့ တစ်အုပ်က သိပ်မကွာခြားမှု မရှိတော့ပေ။ နောက်အုပ်တွေကျရင်တော့ ပြောင်းမလား ပြောင်းမလား ဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်နှင့် ဆက်ဖတ်ဖြစ်သေးသည်။ သို့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေက အပ်ကြောင်း ထပ်နေသည်။ ဆယ်အုပ် ကျော်ကျော်လောက်လဲ ဖတ်ပြီးရော သူ့စာအုပ်ဆိုလျှင် ကိုင်ပင်မကြည့်ဖြစ်တော့ပေ။
အရင်ကဆိုလျှင် ကျွန်တော် စာအရမ်းရေးချင်သည်။ ၀တ္ထုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကဗျာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ချမရေးဖြစ်သည့်တိုင် ခေါင်းထဲမှာ စီကြည့်လျှင် သူ့ဘာနှင့်တူ အစီအရီ။ ထိုစဉ်က နေ့ခင်ဘက်တွင် ဘတ်စကားစီးပြီး တစ်နေကုန် လျှောက်သွားရသော အလုပ်ကိုလုပ်ရသည်။ ဘတ်စကားပေါ်တွင် ကိုယ်ရေးမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး အကြောင်းကို အစီအရီ နေရာချကြည့်ရင်း တော်တော်လေး ဟုတ်နေခဲ့သည်။ ညဘက်ကျတော့ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းထားသည့် အရှိန်ကြောင့် အိပ်ချင်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ချရေးဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတရံတွင်တော့ ချမရေးဖြစ်ခဲ့ပေ။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော် အရမ်းအားနေသော လူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်သည်။ အားနေလျှင် ကျွန်တော် ဇာတ်လမ်းတွေကို အကုန်ချရေးဖြစ်လိမ့်မည်ပေါ့။
တကယ်တမ်း လူအားတစ်ယောက် ဖြစ်လာသည့် အချိန်ရောက်တော့ အသက်နှစ်ဆယ် အရွယ်လောက်ထိ ကွန်ပျူတာ မသုံးတတ်သေးတဲ့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ပျူတာမရှိလျှင် စာမရေးတတ်တော့ဘူးတဲ့လေ။ စိတ်ကူးလေးရလို့ ရေးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း မီးပျက်နေတာနဲ့ မရေးဖြစ်။ မီးလာပြန်တော့လည်း ဘီယာသောက်နေရတာနဲ့ မရေးဖြစ်။ တကယ်ရေးရတော့မယ် အရင်က အားအားယားယား လျှောက်ရေးခဲ့သမျှ အခုနေ ရေးတာနဲ့ နည်းသာများသာ အသာထား ပိုက်ဆံ ရတော့မယ် ရေးတော့ဟေ့ ဆိုတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ ကျွန်တော်တွေဝေ သွားသည်။ ဘာရေးရမှန်းမသိ။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လည်း ဘာမှ ရေးစရာလည်းမရှိ။ ရေးစရာက မရှိလို့ မဖြစ် ဇာတ်ညွန်းကို လက်ခံထားပြီးပြီ။ ထိုအခါ မဖြစ်မနေ ရေးရတော့မည်။ မရေးတော့ဘူး ဆိုပြန်လျှင်လည်း နာမည်က မစရသေးဘူး ပျက်တော့မည်။ ထို့ကြောင့် မဖြစ်မနေ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ကိုတော့ ရေးဖြစ်လိုက်သည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နဂိုအရှိန်လေးနဲ့ မို့လားမသိ ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုကတော့ ရှောရှောရူရူနဲ့ ပြီးသွားရှာသည်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခု ထပ်ရေးဖို့ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်း ရင်မောသွားသည်။
တကယ်တော့ ၀မ်းစာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော် ရင်းနှီးနေတာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဝမ်းစာ ဆိုတာကြီးကို အရင်က ကျွန်တော် သိပ်မယုံကြည်ဘူး။ ကဗျာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်လိုက်ရင် ဖြစ်လာတာပဲ။ အရင်က ကျွန်တော် အဲလိုထင်ထားခဲ့သည်။ အခု နင်လားငါလား တကယ်ရေးရမည့် အချိန်မှာ ရေးစရာတွေ မရှိဖြစ်တော့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ ......
ကျွန်တော် စာကို အရင်လို အရူးအမှုး မဖတ်ဖြစ် မရေးဖြစ်တာ သုံးနှစ်ကျော်သွားပြီ။ ဥပမာ အနေဖြင့် ပြောရလျှင် ဓာတ်ပုံသမား တစ်ယောက်ဖြစ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်စားတော့မည် ဆိုပါက ကင်မရာကြောင်း ဓတ်ပုံအကြောင်းကို အပျော်တမ်း သမားထက် ပိုပြီး အချိန်ပေးလေ့လာရမည်။ ပိုပြီး လေ့ကျင့်ရမည်။ ထို့အတူ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်အဖြစ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်စားတော့မည် ဆိုပါက အပျော်ဖတ်သူထက် စာပေကို ပိုဖတ်ရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲက လူတွေရဲ့ အကြောင်းကို လေ့လာရမည်။ သာမန် ကင်မရာ ၀ါသနာ သမားလောက်တောင် ဓာတ်ပုံအကြောင်းကို မလေ့လာပဲ ပရော်ဖက်ရှင်လုပ်စားရင် အောင်မြင်မှု မရရှိနိုင်သလို၊ သာမန် စာဖတ်ဝါသနာ ပါသူလောက်တောင် စာမဖတ်ပဲနဲ့တော့ စာရေးဆရာကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာ ကြီးပြောသည့် စကားကိုပဲ ပြန်သွားသတိရသည်။ “၀မ်းစာ ကုန်သွားတာကို”တဲ့။ ၀မ်းစာ ဖြည့်တင်းဖို့ အတွက် ကျွန်တော် စာပြန်ဖတ်ရမည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:20 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အပါဝင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဦးသန့် စုဘုရားလဒ် ဒေါ်ခင်ကြည် (ဗိုလ်ချုပ်၏ဇနီး) တို့ အုတ်ဂူများ ဘယ်မှာ ရှိသနည်းဟု မေးလျှင် ရန်ကုန်နေ လူတော်တော်များများပင် မသိကြပါဘူး။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 7:32 AM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
အရင်က ယူကျုမှာ တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကော်နက်ရှင် မကောင်းလို့ မအောင်မြင်ခဲ့ဖူး။ အခုမှ အောင်မြင်သွားတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:10 PM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရန်ကုန်က ကျွန်တော့်ကိုပညာတွေ သင်ပေးခဲ့တယ်
ကောင်လေးမင်းဘာကို ရွေးမလဲတဲ့ .....
မိုးလှိုင်ညဘလော့က ရန်ကုန်ကဗျာတွေကို ဖတ်ပြီး ဒါလေးကို ကျွန်တော်ရေးမိသွားတယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:13 AM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
စွယ်တော်ရွက် ဆိုတာ နှစ်ရွက်ပေါင်းမှ တစ်ရွက်ဖြစ်တယ်။ နှစ်ရွက်ပေါင်းထားတဲ့ စွယ်တော်ရွက်တွေဟာ တစ်ရွက်နဲ့နဲ့ တစ်ရွက် ဘယ်တော့မှ မခွဲပဲ ရော်ရွက်ဝါအဖြစ် ကြွေလွင့်သွားသည့် တိုင်အောင် မခွဲစတမ်း အမြဲတန်း ဒွန်တွဲလို့ . . . .
နင်နဲ့ငါ စွယ်တောပင်အောက်မှာထိုင် စွယ်တော် ရွက်လေးကိုခူး စွယ်တော်ပန်းလေးကို နင့်ခေါင်းမှာ ပန်ပေးရင် သစ္စာတွေ ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ငါတို့တွေ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို ပေါင်းပြီး ဘ၀တစ်ခုကို ထူထောင်ကြမယ်။ ရော်ရွက်ဝါဖြစ် ကြွေလွင့်သည့်တိုင် ငါတို့ နှစ်ယောက် မခွဲကြေးပေါ့
အဲဒီအရာတွေ တက်တက်စင်အောင်လွဲ။ အခုတော့လည်း တစ်ယောက်တည်း စွယ်တော် ပင်အောက်မှာ ရွာက်ခြောက်လေးတွေကို ကောက်ရင်း ငါ့နှလုံးသားတွေ ပြိုကျခဲ့ပြီ။ နင်များ သိလေမလား . . .
တစ်ရက်မှာတော့ အမှတ်တမဲ့၊ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ စွက်တော်ရွက်လေးတွေ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီး လမ်းပေါ်မှာ ကြွေကျနေကြတယ်။ မနေ့ညက လေ တော်တော်ပြင်းတာကိုး ..........
မခွဲဘူးဆိုတဲ့ စွယ်တော်ရွက်တွေက လေမုန်တိုင်းကိုတော့ အံမတုနိုင်ရှာပါဘူး။
အဲဒီလိုပဲ ငါ့တို့နှစ်ယောက် ဘ၀ထဲကို ၀င်တိုက်ခဲ့တဲ့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းကို ငါတို့တွေ အံမတုနိုင်ခဲ့ဘူး။ လေမုန်တိုင်းကပဲ ပြင်းလေးသလား ငါတို့တွေပဲ ညံ့ခဲ့လေလား ........
အခုတော့လည်း ငါတို့တွေ ...
ဒါပေမယ့် ငါ့ရင်မှာ ဖြစ်တည်နေတာကို စွယ်တော်ပင်ရင်းမှာ ရေးထားခဲ့တယ်။ အဲဒီစွယ်တော်ပင်ရင်းက ကဗျာတစ်ပုဒ်က နင့်လာဖတ်မဲ့ နေ့ကို စောင့်နေလေရဲ့ .............
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:56 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒါကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး ဆြာယောပါ။ ဒီဗီယိုကလစ်ကို စီးပွားရေးအလို့ငှာ ကူးယူခြင်း ပြသခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လိုပါက မှုပိုင်ရှင် ဆြာယော နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ ဒါကတော့ ကင်မရာမင်း ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဘလော့ဂ်မှာ တင်ရုံသာ တင်ခွင့်ပေးတာပါ။ ရောင်းချခွင့်မပြုပါဘူး ကျန်တဲ့ ကိစ္စများကိုတော့ ဆြာယောထံတွင် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:30 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကင်မရာခြင်းအတူတူ မှန်ဘီလူးကွဲတော့ ........
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:28 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
နောင်ချိုကနေ မိုင်သုံးဆယ်လောက်ဝေးတဲ့ ညောင်နီဆိုတဲ့ ရွာလေးကို အသွားမှာ လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:04 AM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကောင်မလေး။ ။ အချစ်ဆိုတာ လေ နဲ့တူတယ်တဲ့
ဒါပေမယ့် လေ ဟာတကယ်ရှိနေတယ်
ပြီးတော့ အဲဒီလေမရှိပဲနဲ့ အသက်ရှင်လို့မရဘူး …………..
အချစ်ဆိုတာလဲ လေ လိုပဲ
ဒါပေမယ့်လူတွေဟာ အချစ်မရှိပဲလဲ နေလို့မဖြစ်ဘူး
ကောင်လေး။ ။ ဟုတ်ပါတယ်လေဟာ အချိန်တိုင်းမှာမမြင်ရပါဘူး
လေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတလေးတွေကိုတော့ မြင်ရတယ်
နည်းနည်းလေး တိုက်ရင်တော့ သစ်ရွက်လေးတွေလုပ်တာကို မြင်ရမယ်
တိုက်နှုန်းတွေများလာရင်တော့ နာဂစ်တုန်းကလို သစ်ပင်ကြီးတွေ ကျိုးပျက်သွားမှာပေါ့
အချစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မမြင်နိုင်ဘူး
ဒါပေမယ့် ရင်ခုန်လာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
ရင်ဘတ်ထဲမှာ အချစ်ရှိတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်တယ်
အချစ်တွေ ပိုများလာရင်တော့ နှလုံးသားတွေ တုန်လုပ်ကုန်ပြီပေါ့
အရမ်းကို တုန်လုပ်နေရပြီ. . . . . .
ဒီနေ့ လုံပနီညဈေးမှာ ဘလော့ဂ်ကာ မီးလေးဇာတို့ အုပ်စုနဲ့ ညစာစားဖြစ်ပါတယ်။ အခုတင်ထားတဲ့ ပုံတွေထဲမှာ မီးလေးပုံ ပါပါတယ်။ သူဘယ်သူဆိုတာ မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် ဆုချမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:19 AM6ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:52 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒုတ္ထ၀တီမြစ်ရေကို သောက်ရင် ဒုတ္ထ၀တီကို တစ်ခါပြန်ရောက်တယ်တဲ့
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:16 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:09 PM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
တာပေါ်လင်မိုးထားတဲ့ အိမ်ထဲမှာ ပူလွန်းလို့ သစ်ပင်အောက်မှာ အိပ်နေကြတာ
တောမီးလောင်နေတဲ့ ချောင်းကျဉ်းလေးကို စက်လှေနဲ့ ဖြတ်ကူးတာ စွန့်စွန့်စားစားပေါ့
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:41 PM7ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:26 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
Join me on Director
Come join me on Director!
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဒါရိုက်တာ သင်တန်း ၁/၂၀၀၈ သင်တန်းသားတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ နက်ဝပ်ပါ
To control which emails you receive on Director, click here
ဒီနက်ဝပ်လေးကတော့ အနုပညာကို ဖန်တီးသူ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများနဲ့ အနုပညာကို ခံစားသူ ပရိတ်သတ်များ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအကြောင်းကို ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 7:41 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:53 AM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
Blogger များ Barron အမည်ရှိ Beer သောက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ Blargot က Boစွဲ
မနေ့က စမ်းချောင်းလမ်း ပွင့်မြတ်မိုးခေါ် ၀က်မြှီးဆိုင်မှာ ဘလော့ဂ်ကာများရဲ့ ဘာရွှန်ဘီယာ သောက်ပြိုင်ပွဲကို ကျင်ခဲ့ရာမှာ ဘလာဂေါက်က ဗိုလ်စွဲသွားပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကတော့ ဘလာဂေါက်နဲ့ ကျွန်တော် စိုးဇေယျထွန်း တို့ ယဉ်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး ဘလာဂေါက်က အနိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အနိုင်ရတဲ့အတွက် လောင်းကြေး 1000(မြန်မာငွေ) ကို ဘလာဂေါက်ရရှိသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တက်ရောက်လာကြတာကတော့ တွေ့ဆုံနေကြ ရန်ကုန် ဘလော့ဂ်ကာများနဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ အထူးဧည့်သည်တော် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပေါင်းရှစ်ယောက်ပေါ့။ ဘာရွှန် ဘီယာဆိုတာကတော့ နာမည်ကျော် မြန်မာဘီယာထုတဲ့ မြန်မာဘရူဝါရီကနေ ထုတ်တာပါ။ အယ်ကိုဟော 8.8 ပါပါတယ်။ တော်တော်လည်း မူးပါတယ်။ ဒေါင်ချာစိုင်းပြီး လည်ထွက်သွားတာပဲ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:52 PM 8 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:09 PM6ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ